Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Jimce Ah 24 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Jimce Ah 24 June
June 24, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Barcelona ayaa ugu danbayn dalab ka gudbisay weerar yahanka Bayern Munich iyo Poland ee Robert Lewandowski, oo 33 jir ah, kaas oo ku kacaya ilaa 34 milyan oo gini (40 milyan euros). Telegraph
Kabtanka Portugal Cristiano Ronaldo, oo 37 jir ah, ayaa lagu soo waramayaa inuu ka walaacsan yahay ganacsiga suuqa kala iibsiga ee Manchester United ee ka hoos shaqeeya tababaraha cusub Erik ten Hag, waxaana uu ka fiirsanayaa inuu isaga tago Old Trafford. Telegraph – subscription required
Bayern Munich ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo saxiixa Ronaldo hadii Lewandowski uu ka tago xagaagan. AS – Isbaanish
Manchester United ayaa kordhisay dalabka ay ku doonayso 25 jirka khadka dhexe uga ciyaara Barcelona Frenkie de Jong oo ay ka soo bixisay 60m euros (£51.5m) ilaa 65m euros (£55.8m), laakiin kooxda reer Spain ayaa doonaysa ugu yaraan 75 milyan euros (£64.4m). ) xiddiga heerka caalami ee dalka Holland. Marca
Wakiilkii hore ee Neymar ayaa sheegay in 30-jirka reer Brazil uu riyo ku yahay inuu kula guuleysto Paris St-Germain Champions League mana joogsan doono ilaa uu ka gaaro. Gool
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Denmark Christian Eriksen, oo 30 jir ah, ayaa go’aansanaya inuu ku biiro Manchester United ama uu sii joogo Brentford . Sky Sports
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United iyo France Paul Pogba, oo 29 jir ah, ayaa mabda’a ahaan heshiis ku ah inuu beeca xorta ah ugu biiro Juventus . Sky Italia
Chelsea ayaa Manchester United kula tartami doonta xiddiga garabka uga ciyaara Ajax iyo Brazil ee Antony ka dib markii ay wadahadalo la yeesheen wakiilada 22 jirka. Football
Manchester United, Chelsea iyo Tottenham ayaa sahaminaya rajada ay ku heli karaan xiddiga garabka uga ciyaara Atletico Madrid iyo Belgium Yannick Carrasco, oo 28 jir ah, xagaagan ka dib markii ay soo baxday faahfaahin ku saabsan 60 milyan oo Yuuro (£ 51.5m). AS – Isbaanish
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee France Adrien Rabiot ayaa doonaya inuu ka tago Juventus oo uu ku biiro koox ka dhisan Premier League. 27-sano jirkaan, oo hal sano uga harsan yahay qandaraaskiisa, ayaa lagu heli karaa inta u dhaxaysa 15-20 milyan euros (£ 13-17m). Telegraph
Chelsea ayaa xiiseyneysa 22 jirka Juventus iyo daafaca dhexe ee Netherlands Matthijs de Ligt. Sky Italia
Lyon ayaa u dhaqaaqday saxiixa bartilmaameedka Manchester United Tyrell Malacia. 22 jirkaan heerka caalami ee reer Holland daafaca bidix ayaa haatan u ciyaara kooxda Feyenoord . Metro
Brighton ayaa xiiseyneysa weeraryahanka Manchester City Liam Delap, waxaana laga yaabaa inay 19 jirkaan amaah kula soo wareegto taasoo qeyb ka ah wadahadalada ay kula jirto kooxda heysata horyaalka Premier League ee ku saabsan iibinta daafaca Spain Marc Cucurella, 23. Mail
Manchester City ayaa isha ku heysa inay u dhaqaaqdo 29-jirka reer Jarmal ah goolhayaha Stefan Ortega, kaasoo beeca xorta ah lagu heli karo ka dib markii uu dhacay qandaraaskiisa Arminia Bielefeld . Goal
Leicester City ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rennes Benjamin Bourigeaud, iyadoo 28-sano jirkaan ay u badan tahay inuu Foxes kaga soo iibsado qiimo dhan 8 milyan ginni. Jeunes Footeux
AC Milan ayaa ka fiirsaneysa inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Aston Villa Douglas Luiz, 24 jirkaan reer Brazil wakiiladiisa ayaa u safray kooxda reer Talyaani. TuttoMercatoWeb
Marseille ayaa dooneysa inay amaah kula soo wareegto daafaca reer Portugal Nuno Tavares, oo 22 jir ah, Arsenal ayaana ka fiirsan doonta inay u dhaqaaqdo haddii ay boosas ka qortaan. Sports